Famerenam-bolan'ny famerenana sy miverina - WoopShop ®
Raha tsy nahazo ny vokatra ao anatin'ny fotoana azo antoka (60 andro tsy anisan'io fanodinana andro 2-5 io) dia azonao atao ny mangataka refund na famerenana. Raha nahazo ny zavatra tsy mety ianao, azonao atao ny mangataka refunda na fiverenana. Raha tsy tianao ny vokatra azonao dia azonao atao ny manefa refund saingy tokony averinao ilay vola amin'ny fandaniana, tsy maintsy ampiasaina ny singa ary tsy maintsy ilaina ny laharana manaraka.
Azonao atao ny mandefa ny fangatahana famerenam-bola amin'ny 15 andro aorian'ny fanaterana. Azonao atao izany amin'ny fandefasana mailaka anay.
Raha ankatoavinao ny famerenana, dia havaozina ny volanao, ary ny fampindramam-bola dia hampiharina avy hatrany amin'ny fomba amam-panao voalohany, ao anatin'ny 14 andro. Ny vokatra azo amidy, ny vola dia hampiditra ny mpampiasa ao amin'ny kitapony mba hampiasa izany amin'ny fividianana amin'ny ho avy.
Raha toa ianao ka mila mifanakalo amin'ny vokatrao, angamba amin'ny haben'ny akanjo. Tsy maintsy hifandray aminay aloha ianao ary hitari-dalana anao amin'ny dingana rehetra. ** Aza averinao aminay ny fividiananao raha tsy manome alalana anao hanao izany izahay.